IJalimane izwe okufanele laziwe ngomlando walo omude namathuba emfundo esezingeni eliphakeme elihlinzekayo. Futhi ingelinye lamazwe athola izifiki eYurophu, njengoba abafundi bengathola kalula imfundo futhi banikeze abafundi izimo zokuphila ezifanele zombili ngokwezimali nangokokuziphatha.
Ngendatshana enesihloko esithi Ulwazi Olunentshisekelo NgeGermany, sifuna ukukhuluma ngeJalimane ngezici zayo ezihlukene abantu abaningi abazi, esikhundleni sokwenza isingeniso esijwayelekile ngeJalimane.
IGermany yiZwe Labacabangi, Izimbongi Nabaculi
Sishilo ukuthi iGermany inomlando omude. Izwe, ebelisingethe ososayensi abaningi, izazi zefilosofi, izimbongi kanye nabaculi kusukela endulo kuze kube manje, linezindawo zemidlalo yaseshashalazini, imnyuziyamu, umtapo wolwazi, isakhiwo se-orchestra nemidwebo yezobuciko ebaluleke emhlabeni jikelele. Abaculi abadumile abanjengoBeethoven, Wagner, Bach, noBrahms babambe iqhaza ekukhuleni komculo wakudala kuleli. Ongqondongqondo abaningi abanjengoKarl Marx, uNietzsche noHegel balethe impilo ezweni ngeminyakazo yabo yefilosofi.
Yizwe lapho kubanjelwa khona umkhosi omkhulu wesintu emhlabeni
Umkhosi we-Oktoberfest, umkhosi omkhulu kakhulu emhlabeni, wenziwa njalo ngonyaka edolobheni laseMunich. Lo mkhosi, obelokhu uqhubeka ngaphandle kwenkinga kusukela ngo-1810, uqala ngesonto lokugcina likaSepthemba uphele ngesonto lokuqala lika-Okthoba.
Yizwe lapho kutholakala khona isonto elikhulu kunazo zonke emhlabeni
IJalimane ibamba izivakashi eziningi minyaka yonke ngobuciko bayo bejometri. Enye yezindawo ezivame ukuvakashelwa izivakashi iCologne Cathedral, isonto elikhulu kakhulu emhlabeni, elinobude obungamamitha ayi-161 nezinyathelo ezingama-768.
Izwe elinemiklomelo eminingi yeNobel
IJalimane yafanelekela imiklomelo eyi-102 kaNobel isiyonke emkhakheni wezincwadi, i-physics, i-chemistry kanye nokuthula. Lokhu kukhombisa ukuthi izwe liyikhwalithi ephezulu futhi ithanda kangakanani isayensi nobuciko. Iqiniso lokuthi ososayensi abangama-45 abaklonyeliswa ngeNobel Prize kuleli baqeqeshwa yisibonelo esihle salokhu.
# IGermany yiZwe Labacabangi, Izimbongi Nabaculi
# Yizwe lapho kubanjelwa khona umkhosi omkhulu wesintu emhlabeni
# Yizwe lapho kutholakala khona isonto elikhulu kunazo zonke emhlabeni
# Izwe elinemiklomelo eminingi yeNobel
Izwe laseJalimane - iBundesländer Deutschland
Ngabe AmaJalimane Ayichitha Kuphi Imali Yawo? Indlela Yokuphila eJalimane
Izindawo ongazivakashela eJalimane